Xarunta Frannie Peabody waa Loo shaqeeye Fursado Loo Siman yahay waxayna qiimeysaa kala duwanaanta.
Xarunta Frannie Peabody waxay bixisaa barnaamij faa'iidooyin tartan ah, oo ay ka mid yihiin: doorashada HMO ama caymiska caafimaadka ee PPO, caymiska ilkaha, caymiska nolosha ee AD&D, naafonimada muddada-dheer iyo muddada-dheer, EAP, Qaybta 125 Xisaabaadka Is-bedbeddelaya ee Fursadda ah, iyo waqtiga fasaxa oo lagu daray, iyo fasaxyada la bixiyo.
Ma jiraan wax hada furan.
Xarunta Frannie Peabody waxay siisaa fursado shaqo oo loo siman yahay (EEO) dhammaan shaqaalaha iyo codsadayaasha shaqo iyada oo aan loo eegin jinsiyad, midab, diin, jinsi, jihada galmada, aqoonsiga jinsi ama muujinta, asalka qaran, da'da, naafonimada, macluumaadka hidaha, xaalada guurka, cafiska , ama mansab ruug cadaa ah oo la daboolay si waafaqsan sharciga federaalka, gobolka iyo deegaanka. Xarunta Frannie Peabody waxay u hogaansantaa sharciyada gobolka iyo kuwa maxalliga ah ee khuseeya kala sooc la'aanta xagga shaqada goob kasta oo ay shirkaddu xarumo ku leedahay. Nidaamkani wuxuu khuseeyaa dhammaan shuruudaha iyo shuruudaha shaqada, oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidnayn, shaqaalaynta, meeleynta, dallacaadda, joojinta, dib u celinta, soo celinta, wareejinta, caleemaha maqnaanshaha, magdhawga, iyo tababarka.
Xarunta Frannie Peabody waxay si cad u mamnuucaysaa nooc kasta oo ka mid ah dhibaateynta shaqaalaha sharci darrada ah ee ku saleysan jinsiyadda, midabka, diinta, jinsiga, u jaheynta galmada, aqoonsiga jinsiga ama muujinta, asalka qaran, da'da, macluumaadka hidde, naafonimo, ama xaalad halyeey. Farogelin aan habooneyn oo la leh awooda shaqaalaha Xarunta Frannie Peabody si ay u gutaan waajibaadkooda shaqo gabi ahaanba looma dulqaadan karo.